Sida Loogu Xulo Magaca Domain Meheraddaada | Martech Zone
Jimco, Oktoobar 25, 2013 Douglas Karr
Waa wax xiiso leh in dib loo fikiro markii aan iibsan jiray magacyada domainka marwalba (xitaa hal jeer ayaan iibiyay hal mar!) Iyo sida aan u go'aamiyay waxa aan doonayo inaan iibsado. Waxaan hadda bilownay ganacsi cusub Wareeg Press oo waligood xitaa magacaabin shirkadda illaa aan ka hubno inaan iibsan karno magaca domain-ka! Waxaan qiyaasayaa waqtiyada ay isbedelayaan.
Marka ay timaaddo xulashada magac domain, garaacid dheelitirka u dhexeeya astaamahan muhiimka ah - fudeydka, xusuusta, ku habboonaanta - ayaa fure u ah qabashada hillaaca aan la ilaawin ee guusha dhaladaada internetka.
Waxaan rumeysanahay in waxoogaa wali tirinayaan as jajab wali u muuqdo wax yar oo spammy ah magacyo dhaadheerna runtii waa in laga fogaadaa Sidoo kale, ka taxaddar inaadan ku yeelan higgaado nasiib darro ah gudaha… like Iskaraabka IT at aycrap.com, waa in laga fogaadaa. Yaa ahHostingThis.com diyaari hagitaankan wanaagsan si uu kaaga caawiyo xulashada magacaaga dambe ee domainka!
Tags: brandingekspertenmagaca ganacsigadooro magac domainmagaca domainmagacyada domainhel magaca domainWhoishostingthis.com
Waa Maxay Baraha Bulshadu Ulajeeddo Suuqgeyntaada